नेपाली क्रिकेटको ‘अपरेसन’: जता हेर्‍यो त्यतै भ्वाङ – Butwal Aawaj
9 months ago Butwal Aawaj
नेपालले एकदिवसीय राष्ट्रको मान्यता पाएपछि खेलाडीहरुले सोचेका थिए, अब उज्याला दिन आए । तर, एक वर्ष नबित्दै उनीहरुको उत्साह सेलाइसकेको छ । टिमका सदस्यहरु उकुसमुकुस भएका छन् ।
नेपाल क्रिकेट संघ तीन वर्षदेखि निलम्बनमा छ भने नेपाली क्रिकेटको तालाचाबी बोकेर बसेको आईसीसीको भूमिका नेपाली क्रिकेटलाई माथि लैजानेभन्दा ‘झारा टार्ने’ मात्र देखिएको छ । यसले खेलाडीहरुको प्रदर्शनमा नै असर पर्न थालेको छ ।
पछिल्लो पटक एसिया कप छनोटमा बिर्सनलायक प्रदर्शन गरेको नेपाली टोली टी-२० विश्वकपका लागि एसिया छनोटको तयारीमा जुटेको छ । तर, एसिया कपमा छनोटमा यति कमजोर प्रदर्शन किन भयो भन्ने वस्तुगत समिक्षा हुन सकेको छैन । मलेसियाबाट फर्किँदा कप्तान पारस खड्काले भनेका थिए, ‘नेपाली क्रिकेटमा रहेका समस्याहरुको सही पोस्टमार्टम गर्ने बेला भयो ।’
तर, गर्ने कसले ? हामी नेपाली क्रिकेटसँग जोडिएका महत्वपूर्ण पात्रहरुसँग गरिएको अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा समीक्षात्मक आलेख तयार पारेका छौं । यसमा अन दि फिल्डसँगै अफ दी फिल्डका पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौं ।
अन दी फिल्डका कुरा
क्रिकेट मैदानभित्र हुने प्रमुख तीन गतिविधिहरु हुन्-ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ । नेपालको ब्याटिङ परम्परागतरुपमै कमजोर छ । तर, एसिया कप छनोटमा नेपालको ब्याटिङ मात्र होइन, बलिङ र फिल्डिङको समेत स्तर खस्केको देखियो ।
ब्याटिङ : ब्याटिङ कमजोर हुनुको कारण खोज्न धेरै घोत्लिनु पर्दैन । नियमित क्रिकेट खेल्न नपाउनु नै यसको प्रमुख कारक तत्व हो । घरेलु क्रिकेट शुन्य छ । फाट्टफुट्ट टी-२० लिग हुन्छ, त्यो पनि हिउँदमा । बाँकी समय खेलाडी फुर्सदिला हुन्छन् । जब ब्याट्सम्यानले निरन्तर खेल्न पाउँदैनन्, उनीहरुको फर्म स्वतः खस्किन्छ ।
कहिलेकाहीँ हुने प्रतियोगितामा व्यक्तिगत स्कोर राम्रो बनाउन सकिएन भने टिमबाट बाहिरिनुपर्ने दबाव ब्याट्सम्यानलाई हुन्छ । आउट नहुने चक्करमा धेरै डट बल खेल्न पुग्छन् ।
मलेसियामा भएको एसिया कप छनोटमा नेपालका कुनै ब्याट्सम्यानको प्रदर्शन वाह भन्ने खालको रहेन । ओपनिङ जोडीको संकट कायमै रहृयो भने एकाध खेलमा राम्रो गर्नेले पनि समग्रमा चित्तबुझ्दो प्रदर्शन गर्न सकेनन् ।
कहिलेकाहीँ हुने प्रतियोगितामा व्यक्तिगत स्कोर राम्रो बनाउन सकिएन भने टिमबाट बाहिरिनुपर्ने दबाव ब्याट्सम्यानलाई हुन्छ । आउट नहुने चक्करमा धेरै डट बल खेल्न पुग्छन् । मलेसियामा यस्तै भयो । उदाहरणका रुपमा सुवास खकुरेललाई लिन सकिन्छ । लामो समयपछि टिममा परेका उनले आफ्नो स्थानका लागि खेले तर, सफल भएनन् । र, अहिले उनी टिमबाटै बाहिरिएका छन् ।
छनोटकर्ताको पनि आफ्नै दुःख छ । घरेलु प्रतियोगिता लामो समयदेखि ठप्प जस्तै छ । टिममा भएकाले राम्रो गरेनन भनेर नयाँ खेलाडीलाई मौका दिउँ भने के आधारमा दिनू ? कुन खेलमा परेको प्रदर्शनका आधारमा छनेाट गर्नु ? त्यसैले भएकै २२/२५ जनालाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउनु र टिम बनाउनुको विकल्प छैन ।
Previous पाकिस्तानमाथि कीर्तिमानी जितसँगै भारत फाइनलमा
Next अफगानिस्तानको अर्को तारिफयोग्य प्रदर्शन, भारतलाई रोक्यो
5 months ago Butwal Aawaj